Hogaamiyaha mudada dheer ee Ugandha Yoweri Museveni ayaa qarka u saaran inuu ku guuleysto doorashada madaxtinimo ee dalka iyadoo la tiriyay dhamaan codadkii la dhiibtay Sabtidii, inkastoo ninka sida weyn ula tartamayay Bobi Wine uu ku andacoonayo in wax isdabamarin ay dhacday. baahsan.
Markii la tiriyey 91% codadkii la dhiibtey doorashadii Khamiista, Museveni wuxuu ku guuleystey 5.6 milyan, oo u dhiganta 58.9%, halka murashaxa weyn ee mucaaradka ee Wine uu helay 3.3 milyan oo cod (34.6%), guddiga doorashada ayaa sheegey inyar. wixii ka dambeeya 12-ka duhurnimo. (0900 GMT). Natiijada kama dambaysta ah waxaa la filayay 3 galabnimo (1200 GMT), sida ku cad doorashadii Uganda.
Ciidamada amaanka iyo kuwa booliska ayaa gaaf wareegaya wadooyinka waaweyn ee caasimada, Kampala, maanta oo Sabti ah.
Dowladda ayaa amartay in la xiro internetka maalin ka hor doorashada, dhibaatadana waa ay taagan tahay.
Museveni, oo 76 jir ah iyo 35 sano oo uu xukunka hayey, wuxuu u ololeeyey in loo kordhiyo mar kale, isagoo ku dooday muddadii dheerayd ee uu xafiiska joogay, wuxuuna ballanqaaday inuu horumarin doono xasilloonida xasi.
Wine, 38, ayaa ku booriyay dhalinyarada reer Ugandha inay ku baaqaan isbadal siyaasadeed wuxuuna wacad ku maray inuu soo afjari doono waxa uu ugu yeeray kali talisnimo iyo musuqmaasuq baahsan.
Ciidamada ammaanka ayaa xiray waddooyinka gala xarunta iyo khamriga maalintii Sabtida ee la soo dhaafay suxufiyiinta u sheegay in caalamku u oggolaaday inuu soo galo, goob joogayaal ayaa sidaas sheegay.
Luke Owoyesigyire, oo ah ku xigeenka afhayeenka booliska Kampala ayaa sheegay inuusan ka warqabin in wariyayaashu ay diideen guriga Wine laakiin ay hubin doonaan.
Wine, oo ah fannaan isu beddelay xildhibaan Robert Kyagulanyi, ayaa jimcihii sheegay inuu hayo caddeyn fiidiyoow oo musuqmaasuq codbixinta ah isla markaana uu la wadaagi doono fiidiyowyada isla marka la soo celiyo qadka internet-ka.
Gudoomiyaha guddiga doorashada Simon Byabakama ayaa jimcihii sheegay in sharciga Uganda, culeyska cadeynta uu saaranyahay Wine.
Waa tan talobixinta Gary Neville ee Ole Gunnar